ဝိုလ်ဖင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝိုလ်ဖင် (အင်္ဂလိပ်: wholphin) သည် အလွန်ရှားပါးသော 'စစ်တေးရှန်း' (cetacean - ဝေလငါး၊ လင်းပိုင်း... ) မျိုးစပ်ကောင်ဖြစ်၍ ပုလင်းနှုတ်သီးလင်းပိုင် (Tursiops truncatus) အမနှင့် ဖော့စ်ကစ်လာဝေးလ် (false killer whale, Pseudorca crassidens) အထီးတို့ မျိုးစပ်မှုမှဖြစ်ပေါ်လာသော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ဝိုလ်ဖင် (wholphin) အမည်မှာ ဝေလငါးနှင့် လင်းပိုင်းတို့၏ မျိုးစပ်ထားသော သတ္တဝါဟူ၍ ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း မျိုးရိုးဗီဇခွဲပညာရပ်အရ သတ္တဝါနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ပင်လယ်နေ လင်းပိုင် (မျိုး)မိသားစုမှဖြစ်၍ သွားရှိသော ဝေလငါး မျိုးစဉ်ခွဲအုပ်စုအတွင်းတည်ရှိသည်။ ဝိုလ်ဖင်များသည် (ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက် ရေကန်... ) တို့တွင်မွေးဖွား(သားဖောက်)ကြ၍ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၌လည်း မွေးဖွားကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
ပထမဆုံး မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော ဝိုလ်ဖင်မွေးဖွားမှုသည် ၁၉၈၁ တိုကျို ပင်လယ်ကမ္ဘာဟုခေါ်သော နေရာတွင်ဖြစ်ကာ ထိုသတ္တဝါငယ်သည် ရက်ပေါင်း (၂၀၀) အရ၌ သေဆုံးခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ပထမဆုံး ဝိုလ်ဖင်နှင့် ပထမဆုံး အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သော အကောင်မှာ ကေကိုင်းမော်လူး (Kekaimalu) ဟု ခေါ်တွင်ပြီး ယင်းအမလေးကို ၁၉၈၅ မေ ၁၅ ၌ ဟာဝါရီရှိ အဏ္ဏဝါ ဥယျာဉ် (Sea Life park)တွင်ဖြစ်သည်။ အမည်၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ 'ငြိမ်းချမ်းသော ပင်လယ်မှ' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ကေကိုင်းမော်လူးသည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် သားဖွားနိုင်ခဲ့သောကြောင့် မျိုးအောင်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ မွေးလိုက်သော အကောင်လေူမှာ ရက်အနည်းငယ် အကြာ၌ပင် သေဆုံးသွား၏ ။ ကေကိုင်းမော်လူး ထပ်မံ မွေးဖွားခဲ့၍ မွေးဖွားခဲ့သော အကောင်မှာ အမဖြစ်ကာ ပိုဟိုင်းကဲလိုဟာ (Pohaikealoha) ဟု ခေါ်တွင်သည်။ နှစ်နှစ်ကြာကြာ ယင်းအမလေးကို မိခင် ကေကိုင်းက ဂရုစိုက်သော်လည်း သေသေချာချာ ပြုစုစောင့်ရှောက်သည့်ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပေ။ ထိနကျောင်းလေ့ကျင့်ပေးသော သူများကသာ ပြုစုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အသက် (၉)နှစ်၌ သေဆုံးသွား၏ ။ ၂၀၀၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ တွင် ကေကိုင်း၌ တတိယသားပေါက်ခဲ့ကာ မျိုးစပ်သော အထီးမှာ နှုတ်သီးခေါင်း လင်းပိုင်းတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ မွေးဖွားခဲ့သည်မှာ အမဖြစ်၍ ခေါ်ဝီလီကိုင်း (Kawili Kai) ဟု အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။ မွေးဖွားပြီး လသားပိုင်းတွင်ပင် နှုတ်သီးခေါင်း လင်းပိုင်းတစ်ကောင္၏ အရွယ်အစားခန့် ရှိလာသည်။ မွေးခဲ့သော အကောင်ပေါက်သုံးကောင်လုံးသည် လေးပုံသုံးပုံမှာ နှုတ်သီးခေါင်း လင်းပိုင်ဖြစ်၍ ကျန်သောတစ်ပုံ ဖော့စ်ကစ်လာဝေးလ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ မတ်လ အထိ ကေကိုင်းနှင့် ခေါ်ဝီလီကိုင်းတို့သည် ဟာဝါရီရှိ အဏ္ဏဝါ ဥယျာဉ်တွင် ဆင်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
↑ Whale-dolphin hybrid has baby wholphin။ NBC News (April 15, 2005)။
↑ ၂.၀ ၂.၁ West၊ Karen။ "A Whale? A Dolphin? Yes, It's A Wholphin"၊ May 18, 1986။ July 9, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Born at Sea Life Park on May 15, 1985, Keikaimalu was referred to asawholphin by Sea Life Park’s training staff.”
↑ Sean B. Carroll။ "Remarkable creatures"၊ New York Times၊ September 13, 2010။ September 14, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "The first captive wholphin, Kekaimalu, was born on May 15, 1985, toafemale bottlenose dolphin named Punahele, who sharedapool withamale false killer whale named Tanui Hahai. The wholphin's size, color and shape are intermediate between the parent species. She has 66 teeth – intermediate betweenabottlenose (88 teeth) and false killer whale (44 teeth)"
↑ "Ditching SUVs and Breeding Beefalos" (January–February 2006). E Magazine 17 (1). Retrieved on May 4, 2013. (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ Family Attractions in Oahu – Swim with Dolphins in Hawaii။ Sea Life Park Hawaii (December 24, 2014)။ March 25, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝိုလ်ဖင်&oldid=532092" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။